Andres Iniesta oo ka hadlay farqiga u dhexeeya kooxda Barcelon xili ciyaareedkii lasoo dhaafay iyo xili ciyaareedkan – Gool FM
(Japan) 21 Nof 2018. Xidiga reer Spain Andres Iniesta ayaa ka hadlay xaalada kooxdiisa hore Barcelona ee xili ciyaareedkan, wuxuuna kabtankii hore kooxda reer Catalonia sheegay in wali Blugrana ay tahay koox aad u wanaagsan
Andres Iniesta ayaa ka dhaqaaqay garoonka Cump Nou dhamaadka xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, kadib markii uu go’aansaday inuu u dhaqaaqo kooxda Vissel Kobe ee ka dhisan horyaalka dalka Japan.
Hadaba Iniesta ayaa sheegay: “Barcelona waxay haatan ka fiican sida sanadkii hore, dhamaan ciyaartoyduna waxay awoodaan inay gaaraan ujeedka kooxda ee xilli ciyaareedkan”.
“Arthur Melo wali wuxuu sameenayaa hormar, wuxuu ka garab ciyaari karaa ciyaartoy cajiib ah, laakiin qaabka uu haatan ugu ciyaaro kooxda Barcelona wuxuu noqon doonaa mid aamin ah”.
Andres Iniesta ayaa intaas kadib ka hadlay xaalada xidiga da’ada yar ee reer France Ousmane Dembélé ee kooxda Barcelona.
“Ma aqaano waxa ku dhacay Ousmane Dembélé, sidaasi darteed kama hadli karo, lakiin ciyaaryahanka wuxuu leeyahay xaalad u gaar ah, waa inuu ogaadaa inuu yahay ciyaaryahan muhiim u ah kooxda, islamarkaana uu u sameeyo wax walba kooxda darteed”.
Weeraryahanada ugu Halista badan Premier League oo la soo saaray.....(Salah, Kane, Aguero, Aubameyang, Lukaku iyo xarfaan kale oo waa wayn oo Liiska laga waayay)